2010/2012/2015 Election » ညိုညိုသင်း & I	22
လွှတ်တော်ထဲ လူတော် တစ်ယောက် ကို မဆုံးရှုံးစေချင်ပါ။ အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ဆိုတာ ဆောက်ဖြစ်မှ ကျောင်းဒကာပါ။ ဗဟန်း အတွက်ကိုတော့ ဒေါ်ညိုညိုသင်း ကို ဘဲ မဲ ပေးကြစေချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့
ဇီဇီခင်ဇော် says: Agree…!!!
ဦးကျောက်ခဲ says: ကိုပေါ်တို့ ကေကျူ့တို့သာ ကျောက်စ်တို့ မဲဆန္ဒနယ်ကနေဝင်အရွေးခံ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တကယ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပြင်းတဲ့သူကတော့ ဒီနေရာမှာ ၀င်လို့မရရင်
Ma Ma says: ဒီတစ်ခါတော့ မြ နဲ့ သဘောထားကွဲလွဲတာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
Ma Ma says: ပြည်သူတွေ စိတ်အားငယ်မှာစိုးလို့
kai says: NLD က.. ဘယ်သူတက်လာတက်လာ.. လူထုက ဒီချုပ်ပဲ မျက်စိမှိတ်မဲပေးကြမှာပါ..။
မင်း ခန့် ကျော် says: ပါတီကိုဝန်းရံကြပါ လို့
ကထူးဆန်း says: ဗဟန်းက ၀င်ကြမှာ..
မြစပဲရိုး says: မှတ်ချက် ဝင်ပေးသူ အားလုံးဘဲ ကျေးဇူးပါ။
kai says: မနေ့က ယူအက်စ်ရဲ့.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်သမ္မတလောင်း ဒီဘိတ်မှာတော့.. ဒေါ်နယ်ထရမ့်မွှေလိုက်တာ.. ကျန်သမ္မတာလောင်းတွေ… တော်တော်အလူးအလဲပဲ..။
မြန်မာပြည်မယ်.. ထရမ့်လိုလူတယောက်လိုတယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: ဖြေးဖြေးပေါ့သူဂျီးရေ။
ဦးကျောက်ခဲ says: တတ်နိုင်ရင် အရီးကွန်မန့်ကိုပါ အစိမ်းချယ်ချင်တာ…
“လော်ဘီမြ” လို့ခေါ်ရင် ကျောက်စ်နဲ့တွေ့မယ်… ခိ ခိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ၉၀ တုန်းကတည်းက ဒီဗဟိုဦးစီးဆိုတာကြီးက ချုပ်ကိုင်ထားတာ ၊
ဦးကြောင်ကြီး says: လော်ဘမြီ အော်ကြသီ စော်ဂျပြီ သော်ကညီ…
မြစပဲရိုး says: ချစ်မမ လဲ အလာသေးဝူး။
ဒီတော့ သများ ဥ ထားတာလေး ကို ဒီ မှာဘဲ ချ သွားပြီ။ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mike says: .ဒီလိုတွေလည်းဝေဖန်တာတွေ့ရတယ်
လူပြိန်းကြိုက်စကားတွေနဲ့ နောင်မှ အရေးယူမယ်ဆိုတာဟာ ဥပဒေကို သိသူတွေအတွက်တော့ ဟာသတစ်ခုထက် မပိုပါဘူး……. နောင်မှ ပြင်ဆင်မယ့်အစား အခုကတည်းက မှန်အောင် လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာလေး တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်.…… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12162
Alinsett @ Maung Thura says: လူမှန် နေရာမှန် ရောက်လိမ့် ဖြစ်လိမ့်နိုးးးးးးး
naywoon ni says: အဲ့သည့်​ကိစ္စကို ကျ​နော်​က​တော့ ဒီလိုမြင်​တယ်​ဗျ
” မိဘက သင့်​​တော်​တဲ့သူနဲ့ စီစဉ်​တာကို အချစ်​ကို ​ရှေ့တန်းတင်​တဲ့ သားသမီး​တွေရဲ့ မ​ကျေနပ်​သံ ” လို့ ပဲ မြင်​တယ်​ ။ ဒီ​တော့ကာ မိဘ သဖွယ်​ ယုံကြည်​လို့ ပုံအပ်​မယ်​လို စိတ်​ကူးပြီးကာမှ ကိုယ့်​ ​ဖေးဖရိတ်​ အမတ်​​လောင်းမပါလို့ ဒီပါတီကို မဲမ​ပေး​တော့ဘူး ဆိုတာက​တော့ မဖြစ်​သင့်​ပါဘူး ။ ဒီကိစ္စ ဒီ​လောက်​ပဲ ​ကောင်းမယ်​ထင်​ရဲ့Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: အဘနီ ဥပမာပေး ကောင်းလိုက်တာ။
ထောက်ခံပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: တညား ချစ်မွမွနဲ့ ဆြာနီတို့နောက် လိုက်ပါမယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အဘနီရေ
လုံမလေးမွန်မွန် says: နယ်က NLD ဝင်ပြိုင်မယ့်သူတွေ တစ်ယောက်မှ မသိဘူး… မသိလည်း ပေးရမှာပဲလို့ မှန်းထားတယ်.. သိထားတဲ့ တစ်ခြားပါတီဝင်တွေကို တစ်ယောက်မှ မကြိုက်ဘူး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.